I-Job Application imeyili Indlela Yokubhala Incwadi Yomsebenzi E-UAE 🥇
I-imeyili yesicelo sikaJobe futhi uyazi ukuthi kanjani
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at Kwangathi 3, 2018
I-imeyili yesicelo se-Job e-Dubai
I-imeyili yesicelo se-Job futhi uyakwazi ukubhala ngendlela enhle. I I-Duba City City isebenza abafuna umsebenzi Ungasibhala kanjani isicelo esihle somsebenzi. Ngoba ngaphambi kwe Ukuqasha umphathi izovula incwadi yokuqala ye-imeyili. Dubai City Inkampani njalo nokunikela ngesandla ngokuya indlela yokuthola umsebenzi eMpumalanga Ephakathi. Kufanele ubuke futhi Umhlahlandlela weForbes wencwadi yekhava.
Ukubhala incwadi yokusebenza yomsebenzi ophumelelayo. Ngokuqinisekile umdlalo wayo ushintsho ekucwaningweni kwezemisebenzi. Ikakhulu e-United Arab Emirates kanye neQatar nge I-Saudi Arabia. Iqembu lethu likusiza ngokubhala umhlahlandlela onemininingwane mayelana nokuthi ungabhala kanjani “i-imeyili yomsebenzi wokuwina. Ohlangothini oluhle, ngemuva kwethu umhlahlandlela omuhle, kufanele wazi ukuthi ukwenze kanjani ngendlela eyiyo. Njengomuntu ofuna umsebenzi omusha, kumele abe nencwadi yokumboza emangalisayo imisebenzi e Dubai.
I-imeyili yesicelo somsebenzi kanye incwadi yokumboza evela e-University of Dubai ingaba wusizo kuwe. Qiniseka ukuthi uzolandela imiyalo enikezwe ochwepheshe. Ngawe, ngeke wazi kahle ukuthi indlela ilawula kanjani ngaphakathi indlela efanele Dubai yemisebenzi.
Indlela Yokubhala Isicelo Esiphumelelayo Somsebenzi?
Incwadi yomsebenzi iyinkomba ebaluleke kakhulu kuyo izikhungo zokuqasha. Babheke kuqala isicelo somsebenzi. Ngemuva kwalokho i-agent yokuqasha ngifuna i-resume ebuyekeziwe. Ngesikhathi esifanayo, abantu abathumelayo abangeke bavuselele ulwazi ngolwazi lwekhava. Ngakolunye uhlangothi, lena idokhumenti yesicelo somsebenzi futhi kumele ithumele kanye ne-CV. I inhloso yesicelo somsebenzi ukuhlinzeka ngezinqamuleli ngemininingwane egcwele yokusebenza yesipiliyoni.
Abafuna uJobe kudingeka uphathe isipiliyoni esihle kanye namakhono. Ngakho-ke umqashi angaba nokubheka isipiliyoni sakho ngendlela esheshayo nelula. Futhi, yiba ne bheka incwadi ye-cover e-Dubai ne-Bayt.com. Career abazingeli kudingeka babe nendlela eyingqayizivele yokuguqula intshisekelo yakho emsebenzini othile wenhlangano. Ikakhulu ngoba umsebenzi we-Emirates eMpumalanga Ephakathi.
Ukuthumela isicelo somsebenzi kubalulekile kokuthola inhlolokhono yomsebenzi. Kulezi zinsuku, iningi labaqashi licela incwadi yesicelo ebasizayo ukufakwa kuhlu lwabantu abafuna umsebenzi yocingo lokugcina. Ngaphambi kokuqonda ukuthi ungayibhala kanjani incwadi yomsebenzi, ake sibheke ukuthi i-CV ihluke kanjani kuyo. Khumbula incwadi yokumboza kufanele kube ithikithi lakho empumelelweni.
Amathiphu Okusebenza UJobe Isicelo sokuthumela e-Dubai
Empeleni, Qhubeka futhi ugxile ekuqokomiseni imininingwane yomlando wakho wokuqashwa. Okufeziwe ezikoleni zakho namakhono akho noma iziqu zabantu ngemininingwane ethile. Incwadi yesicelo somsebenzi ichaza konke ngawe. Ikakhulu uma isicelo sakho ufinyelela kudeskithophu yomqashwa. Ngokuvamile, ngaso sonke isikhathi uyithumela kubaqashi. Kufanele kukwenze ube yilowo ozobanga ukhetho ukuvula isikhala esisha.
UJobe application futhi inikeza ukuqonda kwabaqashi. Mayelana nokuthi ungubani unentshisekelo ekuvuleni umsebenzi. Isifingqo sakho somsebenzi kufanele senziwe njengencwadi yenkampani. Ngoba lena yindlela, ukuthi ubuza kanjani mayelana nesikhala somsebenzi. I isicelo semisebenzi yezinkampani zaseMpumalanga Ephakathi kufanele kwenziwe ngolimi lwesiNgisi. Ngoba abaningi abaphathi bezokuqasha bangabakhuluma isiNgisi.
Yini Abaqashi Abafuna Isicelo?
I-imeyli yohlelo lokusebenza lomsebenzi kahle nge-CV eningiliziwe?
Wena njengomhloli womsebenzi udinga ukwazi okuningi mayelana nesistimu yesicelo. Ekukhanyeni kwezinkulungwane zokusebenza zokusebenza. Abazingeli bemisebenzi ulungiselela izinhlamvu ze-Cover CV + ezingenasici. Ngaleso sikhathi, incwadi yesicelo ukuqasha abaphathi idinga ukwenziwa ngqo kwisicelo ngasinye. Ngokwesibonelo, kufanele ucabangele iphuzu elilodwa eliyisihluthulelos kwisicelo ngasinye.
Ingabe unamakhono okwanele ukuhlangabezana nencazelo yomsebenzi?. Iningi lomqashi abaphathi esikhundleni sokudlula ezinkulungwaneni zama-CV. Ufuna ukhetho oluhle kakhulu lomsebenzi ngamunye. Ama-ejenti wokuqashwa bahlunga abazongenela ukhetho oluhle kakhulu. Ngokuvamile, ngokushesha ngangokunokwenzeka. Izinhlamvu zesicelo zingumthombo osheshayo nothembekile wokuqinisekisa uma ozobhapathizwa uhlangana nokuqasha imigomo. Khona-ke futhi abafuna umsebenzi bafanele baqonde ukufaneleka kokuvula isikhala.
Qiniseka uzobe ulungele ukuhlangana nencazelo yomsebenzi. Ngoba abaphathi abaqashiwe basesha abafunelwa kahle ngaphambi kokubanika ucingo. Ngesikhathi ufaka isicelo somsebenzi ngamunye. Kumele uqiniseke ukuthi unolwazi olwanele lwesithuba osisebenzayo. Ngakolunye uhlangothi, uma ucela inkampani efanayo. Uzothola ithuba eliphakeme kakhulu lokuthola umsebenzi eNdiya.
Zibuze umbuzo obaluleke kakhulu ?. Yini eyenza uphume kwabanye ?. Ngokuvamile, izincwadi ezintsha zokufaka izicelo kubaqashi. Inika amandla konke ukhetho lokufinyelela kulabo abangahle basebenze. Ngasohlangothini olubi, kufanele uqhathanise isipiliyoni sakho somsebenzi nabanye, ngokwesibonelo, abafuna imisebenzi abanolwazi lwe-MBA. Kodwa, udinga ukufaka imininingwane ekusiza ukuthi ufinyelele abaphathi abangabasebenzi bakwa-HR. Ngalokhu engqondweni, uhlelo lwakho lokusebenza oluhle lokuthola uhlu olufushane kufanele baphumelele.
Ungakuthola kanjani ukunakekelwa kwama-agent wokuqasha?
Impendulo kuphela yalokhu: kufanele ube nesipiliyoni esihle kakhulu. Impela lokho kuphela indlela yokuthola umsebenzi. Isibonelo, uma sithatha umuntu ngomlando omdala wokusebenza. Ubani onomsebenzi okungenani iminyaka engu-5 ?. Lokho kuyindlela yokubamba abaphathi abaqashiwe. Abafuna umsebenzi neminyaka engaphezulu kwe-10 yokuba nakho indlela esheshayo yokuthola umsebenzi wephupho. Ehlangothini elibi, abantu abasha abaphothulile abanolwazi lwe-MBA nakanjani badinga ukusebenza kanzima.
Enye indlela yokuthola ama-recruitments agents ukuthi abe nezinhlamvu ezibhekiswe phezulu. Lokhu yi indlela enhle yokubamba abaphathi bakwa-HR. Konke okusemandleni, umsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuthi abaphathi abaqashiwe. Akunandaba noma i-CV yakho izoba yini, kumele ibukeke ilungile kuma-eay abaphathi. Ama-ejensi wokuqasha abenawo ibhizinisi izinhloso. Indawo abangenele ukhetho bangashesha ngangokunokwenzeka ukuze kube khona indawo ekhona e Dubai. Ngakho-ke qagela ukuthi ngubani oza kuqala? Umuntu ozobuza amaholo ambalwa !. Imfihlo-ke leyo. Okuncane uzothatha okusheshayo uzothola umsebenzi.
Yini ongayengeza ku-Job Application
Isicelo sokusebenza sezithuba ngasinye ozofaka isicelo. Kufanele uqale ngencwadi yesingeniso ekhuluma ngemininingwane edingekayo. Futhi ngokuqinisekile kufanele sisho indawo noma isikhundla somsebenzi kusetshenziswa futhi kube ngqo. Incwadi ye-imeyili yesicelo se-Job kufanele iqale ngokubingelela okulandelwe igama, isibongo somamukeli, okungukuthi umqashi uma wazi.
Ukukubeka ngenye indlela, kuzodingeka ukugqamisa. Ukuze uhlangabezane neziqu ezincane ezidingekayo esikhundleni. Utholephi lesi sikhangiso somsebenzi ?. Enye iphuzu eliyinhloko, kufanele ulwazi mayelana nokuthi a umqashi noma umphathi we-HR kufanele alandele isicelo sakho. Indlela ehlakaniphile ukucela umfundi (ukuqasha umphathi) ukuthi aqhubeke nokufunda incwadi ye-imeyili yesicelo somsebenzi ukuthola eminye imininingwane. Ungaxhumana kanjani nawe, nokuthi yini ongayinikela kubaqashi abangaba khona.
Into yokuqala okumele uyikhumbule isigaba esilandelayo. Mayelana nokuqokomisa isipiliyoni sakho ukuthi kungani unesithakazelo ekuthumeleleni uhlelo lwakho lwezikhundla zomqashi. Ngaphezu kwalokho, zama ukunciphisa futhi wabelane ngezici ezingase zibe kukusiza ukusekela uhlelo lwakho lokusebenza ngokukhetha okulungile.
Izicelo zomsebenzi kanye nabafundi
Ngenhloso abafundi abatsha abaphothula izifundo. Ngokuqinisekile kudingeka ukhulume ngokuhlangenwe nakho kwezemfundo nokuthi kufanele abathole kanjani. Ingabe umsebenzi wokuzithandela usebenza, noma ngisho nemisebenzi yesikhashana? Konke lokho kufanele kusize ukhetho olusha olusha isici esiyinhloko ekufuneni komsebenzi. Ochwepheshe abanolwazi oluningi kakhulu ngenxa yalokho ukuthuthukiswa kwemisebenzi. Kufanele usho isipiliyoni sokusebenza samanye amazwe nokuthi bakhuthazwe kanjani. Ngaphansi kwalezo zimo, i-imeyili yesicelo ngasinye somsebenzi. Nakanjani kufanele usho izabelo eziyinselele noma amaphrojekthi aqediwe emisebenzini edlule.
Isigaba sokugcina kufanele sigcine incwadi ngendlela yokubonga. Ngoba umqashi noma umphathi we-HR kufanele sibonge umfundi ngokuthatha isikhathi sokucubungula izincwadi zabo zokusebenza.
Isibonelo sohlelo lokusebenza lomsebenzi e-Dubai
Dubai ICity Company ikwazile ukwenza isifanekiso abafuna umsebenzi. Ngokuvamile, ungalandela lo mhlahlandlela lapho usalungiswa Umsebenzi wokuwina Incwadi yesicelo. Ngezansi unayo incwadi yokuwina kumuntu ongakwazi ukuwuqasha. Incwadi yekhava ngezansi yenziwe ngumphathi wethu we-HR. Ngokuqinisekile, nini uyayisebenzisa ekusebenzeni kwakho komsebenzi i-imeyili uzokhulisa ithuba lokubekwa. Vele ngoba uma kukhona okuhloliwe kufanele kusebenze. I-imeyili yesicelo somsebenzi kufanele ibe nayo imininingwane eningiliziwe eDubai.
Lapho abafuna umsebenzi beyisebenzise bese beyithumela kubasebenzi abaqashiwe. Bonke baye bakwazi ukwandisa impendulo evela kumphathi wakwa-HR. Ngaphansi kwalezo zimo, uma ufuna incwadi esembozo efanelekile. Sicela usebenzise okulandelayo bese uzama ukuthola umsebenzi masinyane ngangokunokwenzeka. Iqembu lethu lizoba ngaphezu kokujabula uma uzoyisebenzisa futhi uzothola imisebenzi emisha. Ngezansi une-imeyili yesicelo se-kob. Futhi ungayibhala kanjani incwadi yomsebenzi UAE.
Isibonelo se-Job Isicelo se-imeyili e-Dubai
mobile: + 44 (0) 745 399 0000
Ukunakwa kwe-Agency Recruitment
Ngibhala ukuze ngichaze isipiliyoni sami esiphezulu kanye nerekhodi lethrekhi ephumelelayo njenge ........................ kanye noMphathi wezokuSebenza wesiFunda. Ngikholelwa ukuthi nginakho amakhono, iziqu kanye nolwazi olubalulekile oludingekayo ukuze kube nengxenye ebaluleke kakhulu ekusebenzeni kwakho.
Ngomqashi wami wamanje ...................... Ngangiziphendulela ngezifunda ze-12 zebhizinisi, ngisebenza emakethe okuncintisana kakhulu okwenza ngiqonde ukuthi kubaluleke kangakanani ukutholakala kwamakhasimende nokwakha umkhiqizo ukukhomba ukuthengiswa okungenzeka. Kulo bhizinisi, ngithuthukise ukusebenza kwezezimali ngokuqeqesha, ukuthuthukisa, ukuqeqesha nokuxoxisana nabacebisi bezezimali abanginika okungaphezulu + kwe-20k ngesonto.
Ngingumuntu ohlakaniphile kakhulu futhi ngishukumisa kakhulu. Njengoba uzobona kusuka ku-CV yami ekhonjiwe, engxenyeni yami yamanje ngikhiphe ukwanda okukhulu kokuthengisa ku-60% kuya ku-20% ukukhula ngokuqhuba ukubuyekezwa kwebhizinisi ngokufeza izinga eliphezulu lemali engenayo nokunciphisa imali elahlekelwe ebhizinisini.
Ngiye ngaba nesandla ekuvuleni nasekuhlanganyeleni kwe-19 entsha ............ .. ibhizinisi yonkana ............ ............. nomqashi wangaphambilini, konke okuye kwaphumelela futhi kuye kwaba yimali engenayo yokuthengisa ye £ 12 m. Amakhono ami afunde endaweni yokuphatha imenenja isho ukuthi nginamandla okwenza ngomoya ophansi ngenkathi ngicindezelekile futhi ngathuthukisa ithalente lomsebenzi wami, futhi amakhono ami wokuhlela ibhizinisi aphezulu kakhulu.
Manje ngifuna isikhundla esisha esinzima lapho amakhono ami nolwazi lwami ekhona lungasetshenziswa ngokugcwele futhi lapho ngingakhula khona futhi ngithuthukise ngokusemthethweni.
Sicela unganqikaze ukungibiza ngakho-ke + 44 (0) 745 399 0000 singakwazi ukuhlela ingxoxo ukuze sixoxisane nesicelo sami ngokujulile okukhulu.
Amanye Amaphuzu Okusheshayo Okumele Awakhumbule ngesicelo
Qinisekisa ukuthi uzofaka ukuthi unesithakazelo enkulumweni engaba khona kanye nesignesha.
Yisho igama le-recruiter noma umphathi we-HR.
Umsebenzi we-Job kumele uhlolwe kabili.
Engeza ulwazi onentshisekelo ekuxoxweni.
Thola inothi ukuthi ungaqala ngokushesha ngemva kokuxoxa.
Hlola izikhathi eziningana i-CV yakho, sebenzisa i-a I-plugin ye-Grammarly ku-resume yakho ukuze uqiniseke ukuthi awukho amaphutha.
Isihloko Somsebenzi Nemininingwane Yokuxhumana
Kulungile, qiniseka uyohlale welulekwa ukugcina isihloko somsebenzi nemininingwane yokuxhumana ivuselelwa. Njalo uma ubhala imininingwane enemininingwane. Kufanele usho igama lomuntu owemukela umqashi. Ngaleso sizathu, zama ukunikeza ukuthinta komuntu ngamunye isicelo somsebenzi imeyili. Indlela engcono kakhulu ukuyigcina kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi uthumela bani isicelo sakho. Zama ukushiya igama futhi uma kunokwenzeka isibongo. Ngaphezu kwalokho, ungase ukwazi ngisho negama le Umqashi. Ngakho zama ukukhuluma yonke imininingwane, ngisho nakumkhangisi womsebenzi. Thola kabanzi mayelana inkampani ku-Linkedin futhi kwenzeke.
Ungalokothi wenze i-replica ye-Resume yakho
Khumbula, ungalokothi udale ikhophi yakho yokuqalisa. Njengencwadi yokufaka isicelo kumphathi wokuqasha. Ngenxa yalesi sizathu, kungukuthi Qalisa kabusha ku-Linkedin, ungangezi isipiliyoni esingeziwe namaphoyinti aphezulu we-bullet. Njalo qiniseka ukuyigcina ngendlela ephephe kakhulu. Abaphathi abaningi abangochwepheshe ahlinzeke alula kepha afundise kakhulu. Ukuqiniseka ukuthi amaphuzu avelele amaphuzu abalulekile encwadini yakho ye-imeyili yesicelo abukeka kahle futhi kulula ukuwafunda. Ngokuqinisekile ungafaki lonke ulwazi oluningiliziwe. Lokhu kufanele kukhulunywe ku-CV.
Gcina ugxile ukuthi ungubani
Into esemqoka ukugcina umbono wokuqala. Ngoba ukuqasha abaphathi kungaba ngumqondo wokugcina. Kepha zonke izinto ezithathwa njengencwadi yesicelo somsebenzi. Qiniseka ukuthi uzokwengeza amaphuzu wokuchashazi kanye nemigqa yokuvula. Futhi zama njalo amandla okuvala imigqa nakho okubalulekile kubaphathi be-HR. Ekugcineni, abaqashi kufanele bakwazi ukuthola ozongenela ukhetho ngokuzayo. Futhi lapho usunakho konke endaweni yakho kuzoba nguwe. Ukugxila okuyinhloko nakho eqinisekisa ukuthi imenenja ye-HR noma umqashi ongase abe khona. Vele ukhethe uhlu lwakho lohlelo lokusebenza lochwepheshe bese uthumele inkampani engenzeka. Esikhundleni sokuyithumela e-mail yedoti.
Gcina i-Resume yakho ngefomethi ye-Word noma ye-DOC
I-CV yakho kufanele ibe njalo ku-WORD noma i-DOC. Ngoba abenzi abafunayo imisebenzi ephutha, ifomu le-PDF. Ake sicabange ukuthi umphathi wokuqasha uzothola ukuQala kabusha. Futhi ungathanda ukushintsha imininingwane encane. Ngokuqinisekile kuyoba nzima ngaye ukuyilawula ngaphezulu kwe-PDF. Indlela engcono kakhulu ukugcina amafomu wegama elijwayelekile. Ungakwazi ngisho nokuthola bheka indlela ye-Microsoft ye-Linkedin. Kuyindlela enhle kakhulu yokusiza abaqeqeshi. Uma ubasiza baqagela ini ?. Bayoba ukukuqasha lapho!.
Isethulo e-Linkedin ibalulekile
Akukho okunye umqashi nokuqasha abaphathi unesithakazelo ekufundeni ukuqala okungafaneleki. Indlela engcono kakhulu ukukwenza sebenzisa i-Linkedin ye-CV. Ngakho-ke, nalesi simiso. Ngeke ukwandise ubude bencwadi yakho yesicelo. Abaphathi bokuqasha bazokwazi ukuqinisekisa okuhlangenwe nakho kwakho nabanye kuma-social media. Iningi lezingcezu zolwazi ku-Linkedin. Ngokuqinisekile kufanele kube nemininingwane kuphela eyenzayo ukusekela ukukhetha kwakho kocingo lwe-interview.
Lapho ubhala iphrofayili yakho ku-Linkedin. Sicela uzame ukukugcina kufushane bese unamathela kumaphoyinti afanele kuphela. Ungalokothi ufake imininingwane engafanele njengezikole ze-basketball for kids zakho. Futhi ungalokothi ubeke isithombe nengane yakho noma inja. Kuyindlela yobungcweti esuka ku-A kuye ku-Z. Iphrofayili engcolile kuma-media social social. Ngeke isize incwadi yakho yesicelo ukuze uphumelele e-Dubai.
Ukuphela kwendlela enkulu yokujika Uhlangothi oluhle kubaqashi. Ukuyigcina ihlelwe i-CV yakho ne-Linkedin. Kumidiya yezenhlalo, kufanele abukeke njengochwepheshe, futhi ashiye isikhala esifanele phakathi kokuhlangenwe nakho kwakho. Qiniseka ukuthi ayinama-typo noma amaphutha wolimi. Ngoba ukuqasha abaphathi babheke lokho.
Isiphetho se-Job Application Email
Manje sase sifika emaphethelweni, ekugcineni ukuthi sikuphatha kufushane. Njalo gcina indlela yobungcweti. Qiniseka ukuthi i-Linkedin yakho futhi uqala kabusha ngokuqukethwe okufanayo. Gcina ulwazi olufanele kuphela ungalokothi ufake ulwazi olungafanelekile ku-imeyili yakho yohlelo lokusebenza. Futhi njalo kuhlale kungokomuntu siqu, engeza igama lokuqasha, inkampani oyisebenzelayo futhi uthumele i-imeyili yakho kuyo kuphela imisebenzi ehlinzekayo efanele. Konke lokho kufanele nakanjani sikusize uthole umsebenzi wakho wephupho.
Kusuka kusayithi lethu, yilokho okudingayo. Sicela usebenzise incwadi yethu yekhava, futhi usazise ukuthi kuhamba kanjani. Sihlala njalo ezama ukusiza abafuna umsebenzi ukuthola umsebenzi wephupho.
Dubai City Company manje ihlinzeka ngemikhombandlela emihle yemisebenzi. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje usungathola iziqondiso, amathiphu nokuqashwa ku I-United Arab Emirates ngolimi lwakho.